တရုတ်နှင့်အမေရိကန် နှစ်နိုင်ငံ အဆင့်မြင့်အရာရှိများ စီးပွားရေးဆက်ဆံမှုနှင့်ပတ်သက်၍ အွန်လိုင်းvideo စနစ်ဖြင့်ဆွေးနွေး - Xinhua News Agency
တရုတ်-အမေရိကန် ဘက်စုံစီးပွားရေးညှိနှိုင်းဆွေးနွေးမှုဆိုင်ရာ တရုတ်နိုင်ငံ ခေါင်းဆောင် ၊ တရုတ် ကွန်မြူနစ်ပါတီ ဗဟိုကော်မတီ နိုင်ငံရေးပေါ်လစ်ဗျူရို အဖွဲ့ဝင်၊ ဒုတိယ ဝန်ကြီးချုပ် လျူဟဲသည် အမေရိကန်နိုင်ငံ ဘဏ္ဍာရေး ဝန်ကြီး Janet Yellen နှင့် ယနေ့ ဇွန် ၂ ရက် နံနက်ပိုင်းတွင် Video Conversation ဖြင့် ဆွေးနွေးခဲ့ကြကြောင်း သိရသည်။တရုတ်-အမေရိကန် နှစ်နိုင်ငံ စီးပွားရေး ဆက်ဆံရေးသည် အလွန်အရေးကြီးသည်ကို နှစ်ဘက်စလုံးက ယုံကြည်ထားကြောင်း သိရသည်။တန်းတူညီမျှမှု နှင့် အပြန်အလှန်လေးစားမှုတို့အပေါ် အခြေခံ၍ နှစ်ဦးနှစ်ဘက် နှင့် ဘက်ပေါင်းစုံ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေး ၊ မက်ခရိုစီးပွားရေး အခြေအနေအပေါ် ကျယ်ပြန့်စွာ ဖလှယ်မှုများ ပြုလုပ်ခဲ့ပြီး အပြန်အလှန်စိုးရိမ်ပူပန်မှုရှိသည့် ကိစ္စရပ်များအပေါ် ပွင့်ပွင့်လင်းလင်း အမြင်ဖလှယ်ခဲ့ကြောင်း နှင့် ဆက်သွယ်ရေးကို ဆက်လက်ထိန်းသိမ်းရန် သဘောတူခဲ့ကြောင်း သိရသည်။ (Xinhua)
BEIJING, June2(Xinhua) — Chinese Vice Premier Liu He,amember of the Political Bureau of the Communist Party of China Central Committee and chief of the Chinese side of the China-U.S. comprehensive economic dialogue, heldavideo conversation with U.S. Treasury Secretary Janet Yellen on Wednesday morning.
In the spirit of equality and mutual trust, they conducted extensive exchanges on the macroeconomic situation and bilateral and multilateral cooperation, candidly exchanged views on issues of mutual concern, and expressed willingness to maintain communication. ■
UNESCO မှ တရုတ်နိုင်ငံ ဆန်းရှင်းတွေး၌ တူးဖော်တွေ့ရှိမှုများကို ဂုဏ်ပြု